कम्बोडियनहरूलाई मदत गर्ने—सानो छँदा मैले गरेको छनौट | अध्ययन
प्रहरीधरहरा—अध्ययन संस्करण | जनवरी २०१४
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन आर्मेनियन (पश्‍चिमी) इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इलोको ईवी उङ्गाबेरे उज्बेक उन्डुबेली उम्बुन्डु उर्दू एफिक एस्टोनियन ओटेटेला ओरोमो कन्नडा कम्बोडियन काजाक किकाओन्डे किकुयु किन्यारवान्डा किम्बुन्डु किरून्डी किर्गिज कोंगो कोरियन कोलम्बियन साङ्केतिक भाषा क्याटालान क्रोएसियन क्वान्गाली क्वान्यामा क्वेचा (अनक्यास) क्वेचा (आयाकुचो) क्वेचा (कुज्को) क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गा गाउरानी गुजराती गून ग्रीक ग्रीनल्यान्डीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चेक जर्जियन जर्मन जापानी जुलू टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या डच डेनिश ड्रेहु तामिल ताहिटी तेलगु त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नेपाली नोंगा न्यानेका पंगासिनन् पंजाबी पापियामेन्टो (अरुबा) पारसी पोर्चुगिज पोलिश फिनिश फ्रान्सेली बंगाली बिकोल बिस्लामा बुल्गेरियन ब्राजिलियन साङ्केतिक भाषा भियतनामिज भेन्डा मराठी मले मल्यालम माया मालागासी माल्टिज म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रारोतोंगान रूसी रोमानियन लाट्भियन लिंगाला लिथुआनियन लुओ लुगान्डा लुन्डा लुभेल वलिसियन वारे-वारे वोलाइटा शिलुबा शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) साङ्गो सामोअन सिंहला सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) सोट्सेल स्पेनिश स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाती स्वाहिली स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिन्दी हिब्रू हिलिगेनोन
सानो छँदा मैले गरेको छनौट
घटना सन्‌ १९८५ को हो। त्यतिखेर म १० वर्षको थिएँ र अमेरिकाको ओहायो राज्यको कोलम्बसस्थित एउटा स्कूलमा पढ्थें। कम्बोडियाबाट केही केटाकेटी मेरो स्कूलमा पढ्न आएका थिए। उनीहरूमध्ये एक जना केटालाई अलि-अलि अङ्ग्रेजी बोल्न आउँथ्यो। चित्र देखाउँदै उसले मलाई कम्बोडियामा भएको हत्या-हिंसा, अन्याय र अत्याचारबारे बतायो। साथै ज्यान जोगाउन घरबार छोडेर भागेका मानिसहरूबारे पनि सुनायो। स्कूलमा आएका ती केटाकेटीलाई सम्झेर म रातभर रोएँ। म उनीहरूलाई प्रमोदवन र पुनर्जीवनबारे बताउन चाहन्थें तर उनीहरू अङ्ग्रेजी बुझ्दैनथे। स्कूलका ती साथीहरूलाई यहोवाबारे बताउन मैले सानै भए तापनि कम्बोडियन भाषा सिक्ने निर्णय गरें। यस निर्णयले भविष्यमा पार्ने प्रभावबारे त्यतिखेर मैले सोचेको पनि थिइनँ।
कम्बोडियन भाषा सिक्न मलाई सजिलो भएन। दुई चोटि त हार मानिसकेको थिएँ। तर यहोवाले आमाबुबामार्फत मलाई प्रोत्साहन दिनुभयो। शिक्षक र साथीहरूले मलाई राम्रो कमाइ हुने पेसा अँगाल्न दबाब दिन थाले। तर म अग्रगामी सेवा गर्न चाहन्थें। त्यसैले पछि पार्ट-टाइम काम गर्दै अग्रगामी सेवा गर्न मदत पुग्ने विषय हाई-स्कूलमा रोजें। स्कूल छुट्टी भएपछि केही अग्रगामीसितै प्रचार जाने गर्थें। स्कूलका विद्यार्थीहरूलाई अङ्ग्रेजी भाषा सिक्न पनि मदत गर्थें। यसले पछि मलाई निकै मदत गऱ्यो।
क्यालिफोर्नियाको लङ बिचमा कम्बोडियन भाषाको समूह छ रे भनेर १६ वर्षको हुँदा सुनें। म त्यहाँ गएँ र कम्बोडियन भाषा पढ्न सिकें। हाई-स्कूलको पढाइ सिद्धिनेबित्तिकै अग्रगामी सेवा सुरु गरें र घर वरपरका कम्बोडियनहरूलाई नै प्रचार गरिरहें। अनि १८ वर्ष पुग्दा त कम्बोडियामै बसाइँ सर्नेबारे सोच्न थालिसकेको थिएँ। कम्बोडियामा अझै खतरा थियो तर त्यहाँका १ करोड मानिसमध्ये थुप्रैले सुसमाचार सुन्ने मौका पाएका थिएनन्‌। त्यसबेला कम्बोडियाभरि एउटा मात्र मण्डली थियो र १३ जना मात्र प्रकाशक थिए। उन्नाइस वर्षको हुँदा पहिलो पटक कम्बोडिया गएँ। यसको दुई वर्षपछि त्यहीं बसाइँ सरें। अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गर्ने र अङ्ग्रेजी भाषा सिकाउने पार्ट-टाइम काम गरें। अनि जीवनसाथी पनि मेरो जस्तै लक्ष्य भएकी पाएँ। हामी दुई मिलेर थुप्रै कम्बोडियनलाई यहोवाको साक्षी हुन मदत गरेका छौं।
यहोवाले मेरो “मनोरथ” पूरा गरिदिनुभएको छ। (भज. ३७:४) प्रचारकार्य सबैभन्दा उद्देश्यपूर्ण पेसा हो। कम्बोडियामा बसेको १६ वर्ष भइसक्यो। सुरुमा कम्बोडिया आउँदा १३ जना मात्र प्रकाशक भएको एउटा सानो मण्डली थियो। तर अहिले त १२ वटा मण्डली र चारवटा पृथक समूह भइसक्यो!—जेसन ब्ल्याकवेलको वृत्तान्तमा आधारित।
आध्यात्मिक लक्ष्यहरू हासिल गर्ने यहोवाका साक्षीहरूको अनुभव
तिनीहरूले राजीखुसीले आफैलाई अर्पण गरे—पश्‍चिम अफ्रिका
युगयुगका महाराजा यहोवाको उपासना गर्नुहोस्
मसीही राज्यको १०० वर्ष—यसले तपाईंको लागि कस्तो अर्थ राख्छ?
युवावस्थामा बुद्धिमानी निर्णय गर्नुहोस्
दुःखको समय आउनुअघि नै यहोवाको सेवा गर्नुहोस्
“तपाईंको राज्य आओस्”—तर कहिले?
Text डिजिटल प्रकाशन डाउनलोडका विकल्प प्रहरीधरहरा—अध्ययन संस्करण जनवरी २०१४
प्रहरीधरहरा—अध्ययन संस्करण जनवरी २०१४